Momba anay - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Jrain FRP, izay hita ao amin'ny Hengshui City of China, dia mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra composite. Nanamboatra vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika (FRP) maro be izahay nanomboka tamin'ny taona 2008 ary mbola mavitrika amin'ny fanatsarana ny vokatra, ny dingana ary ny fampandrosoana ny tsena.
Mandraka ankehitriny dia manana ny 5000m izahay2atrikasa, miaraka amin'ny milina fanamafisana, fitaovana fanaovana banga sy bobongolo, sns. Izahay dia manamarina miaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001. Nahazo labana mifandraika sy fitaovana fanandramana FRP matihanina koa izahay. Mahafantatra ireo kaody iraisam-pirenena mifandraika betsaka isika ary avy eo manamboatra ireo vokatra mifototra aminy toa ny ASME, ASTM, BS EN.
Nandritra ny 12 taona lasa, nanao vokatra FRP an'arivony isika toy ny fantson-doha FRP, fittings, tank, tilikambo, firakotra, gratings ary vokatra namboarina hafa. Mpiara-miasa maharitra ho an'ny mpanjifa an-jatony isika toy ny USA Crimar, GE Water, Canada Saltworks Inc., Italia Selip SPA, Etazonia FLSmidth, Alemana Aurubis.
Ny fahaizan'ny Jrain amin'ny injeniera sy ny famokarana FRP dia ahafahana manome vahaolana tsy manam-paharoa mba hahafahana mameno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Tongasoa eto amin'ny alàlan'ny fifandraisanay momba ny vahaolana FRP.
hamolavola, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP, Famolavola grating, Nohavaozina Fiberglass,